Lorcaserin - Onye na-emepụta ihe nrụpụta
CMOAPI nwere akụrụngwa akụrụngwa nke lorcaserin, ma nwee njikwa njikwa dị mma ..Agabiga GMP na asambodo DMF.
Igosi 1-3 nke 6 utịp
Kedu ihe bụ Lorcaserin?
Lorcaserin (Belviq) bụ onye na-egbochi oke ibu. Ọ bụrụ na ị dị njikere maka ịbupụ ibu arọ ahụ na-enweghị ihe ọ bụla gbasara mgbatị ahụ dị egwu, lee ihe ị kwesịrị ịdeba ama tupu ịzụrụ ọgwụ serotonergic.
Ọ bụ Arena Pharmaceuticals mepụtara Lorcaserin hydrochloride. Kemgbe ọtụtụ afọ, a na-eji ya dịka ọgwụgwọ ogologo oge maka oke ibu. Ihe mgbakwunye ahụ na-egbochi agụụ site na ịba ụba satiation. E wezụga nke ahụ, ịkọ ụda olu adịghị achọ ka ị gbasoo ụfọdụ nri siri ike ma ọ bụ mmega ahụ.
Kemgbe ọ malitere, ọgwụ a emeela ọtụtụ nnwale dị iche iche na ọmụmụ mmadụ iji chọpụta nrụpụta ya na nnabata ya n'ịgwọ oke ibu. Na 2012, FDA kwadoro lorcaserin (Belviq) maka ịgwọ ọrịa mana n'okpuru usoro siri ike. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ naanị maka ndị okenye buru oke ibu na oke ibu bụ ndị nwere ọgwụ ndị metụtara ibu dịka ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, na dyslipidemia.
E nwere aha abụọ a ma ama, nke ahụ bụ, Belviq na Belviq XR. Ha abụọ fọrọ nke nta ka ha yie, nwere lorcaserin hydrochloride dị ka ihe na-arụ ọrụ.
Belviq capsules dị ntakịrị, a na-ekekwa usoro ọgwụ ahụ ụzọ abụọ kwa ụbọchị. Contrariwise Belviq XR capsules dịkarịsịrị elu. Aha lorcaserin a nwere mbadamba oroma a na-ewepụta otu ugboro n'ụbọchị.
Lorcaserin na Lorcaserin Intermediates
A na-akpọkarị onyinye a dị ka lorcaserin hydrochloride. Otú ọ dị, aha sayensị ya bụ 8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride (CAS: 1431697-94-7).
Racemic Chlorocaserin Hydrochloride ntụ ntụ na-enweta site na ịgwakọta dextrorotatory chlorocaserin hydrochloride na lev-rotatory chlorocaserin hydrochloride. A na-eji etiti lorcaserin mee ihe na ọmụmụ ihe na nkwadebe nke ọgwụ na-efu ibu.
A maara nke ọma dị ka (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine hydrochloride (CAS no: 846589-98-8). Agbanyeghị, n'okwu ndị nkịtị, ọ bụ (R) lorcaserin hydrochloride.
Nke a bụ ihe nyocha nke nyocha maka ịmụ akwụkwọ ọgwụ nke ọgwụ ọgwụ. Na nyocha nke emere na umu oke, onyinye a na egosiputa nsogbu anorectic. E wezụga nke ahụ, ọ na-ebelatakwa ị intakeụ ọgwụ mgbu na ọgwụ ike dị ka cafine, amphetamine, na ọgwụ ndị yiri ya.
Aka nri Green Casserole
Sayensị, nke a bụ (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine na CAS mba. 616202-92-7.
A na-enweta akpaka na-acha akwụkwọ ndụ aka nri maka nyocha na ihe ọmụmụ. Ihe a na - ahọrọ agonistic na ndị na - anabata 5-HT2C, yabụ, bara uru na nyocha nke ọgwụ na - egbochi agụụ.
A maara ụlọ ọrụ a dịka lorcaserin hydrochloride hemihydrate. Ihe omuma ya bu (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine hydrochloride hemihydrate (CAS: 856681-05-5).
Dextrorotatory Chlorocaserin Hydrochloride bụ ihe akụrụngwa maka njikọ lorcaserin.
Racemic Chlorocaserin Free Isi
Aha ya bụ 8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine (CAS no: 616201-80-0).
Racemic Chlorocaserin Free Base bụ ngwaahịa ọgwụ maka iji mee nnyocha na nyocha sayensị.
Aha sayensị ya bụ 1 - [[2- (4-Chlorophenyl) ethyl] amino] -2-chloropropane hydrochloride (CAS no: 953789-37-2). Green Card Serin bụkwa onye etiti na nkwadebe nke mgbakwunye lorcaserin.
I kwesiri iburu n'uche na ndi a nile bu ndi mmadu na-eme nyocha. Ogige ndị ahụ erughị eru maka oriri mmadụ ma ọ bụ anụmanụ.
Kedu ka Lorcaserin si arụ ọrụ?
Lorcaserin (Belviq) na-elekwasị anya na Central Nervous System site na isoro ndị nabatara hypothalamic kpọmkwem. Ọ na-eme site na ịme serotonin 2C (5-HT2C) na pro-opiomelanocortin neurons. Akụkụ ụbụrụ a nwere aka na agụụ na omume iri nri. Ọ bụ ezie na e nwere subtypes ndị nnabata ndị ọzọ dị ka 5-HT2A na 5-HT2B, ọgwụ a nwere njikọ kachasị elu maka 5-HT2C.
Mgbakwunye ọnwụ Lorcaserin na-eme ka ndị natara 5-HT2C rụọ ọrụ, ya mere, na-akpali ngosipụta nke homonụ alpha-MSH. Alpha-MSH na-arụ ọrụ na melanocortin-4-receptors, nke na-eziga mgbaàmà na ụbụrụ na ị juputara.
Ihe agonistic nke lorcaserin na onye nnata 5-HT2C na-eme ka afọ ojuju, yabụ, na-ebelata iri nri ma na-eme ka ọnwụ dị arọ. Dị ka ụfọdụ nkwupụta sayensị si kwuo, ọgwụ serotonergic a na-agbanwe ogo nke leptin, homonụ nke na-ekere òkè n’ibu ibu. Ihe agbakwunyere iji mgbakwunye a dị ka ihe na-egbochi oke ibu bụ na ọ naghị anyụ ọrịa obi na-efe. Ihe kpatara ya bụ na ọ bụ obere ihe nhụjuanya nye ndị natara 5-HT2B.
Uru Lorcaserin na mmetụta ndị dị na ya
Inweta lorcaserin hydrochloride na-eme ka mmetụta nke satiety dịkwuo elu. Ọ na - enyere aka banyere nsogbu iri nri, dị ka nke na - adịkarị ndị na - eri mmụọ na ị bụbiga mmanya ókè. Dika ule ndi ogwu na-aga nke oma, mmadu nwere ike ida ma obu ihe kariri 5% nke aru ha na izu iri na abuo.
Ọ bụ ezie na ọ dị obere, ịhapụ ihe na-erughị 5% nke ibu gị mgbe ị na-ekwu okwu pụtara na ị gaghị enwe ike nweta ihe ọ bụla bara uru ọbụlagodi na ọgwụgwọ ogologo oge. N'oge a, ndị na-eme nchọpụta na-atụ aro ka ị kwụsị inye mgbakwunye mgbatị ibu.
Iji ihe a serotonergic gị n'ụlọnga ga-akpalite usoro ọkụ-abụba. Agbanyeghị, ịkwesịrị itinye ụfọdụ mmemme ahụ mgbe ị na-agbaso nri obere kalori. E wezụga nke ahụ, ịkọwapụta ụda olu na njikwa na-adabere na nchịkwa na-aga n'ihu. Kwụsị usoro onunu ogwu nwere ike imetụta nsonaazụ na-adịghị mma.
E wezụga nchịkwa dị arọ, lorcaserin na-arụkwa ọrụ site n'ịchụpụ oke nchịkwa nke dopamine na nzaghachi nye ụfọdụ ọgwụ dị ka caffeine, morphine, codeine, ma ọ bụ amphetamines. Mmetụta agonistic nke mgbakwunye na ndị nabatara serotonin na-eme ka ọ dabara adaba maka ijikwa ọrịa psychotic.
Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo, lorcaserin nwekwara ike belata mgbaàmà nke ịme ihe ike ebe ọ na-ebelata ịhapụ dopamine.
Azụ ma ọ bụ mgbu mgbu
Ugboro na ike urination
Ọhụụ gbanwere dị ka obi ụtọ
Ihe karịrị ọkara nke mgbaàmà na-adịghị mma nke lorcaserin HCl bụ n'ihi ịdoụbiga mmanya ókè. Nwere ike ịgabiga mmetụta nke lorcaserin site na ịrapagidesi ike na ọgwụ ọjọọ. Dịka ọmụmaatụ, ịkwesighi ịfefe usoro onunu ogwu kwa ụbọchị. N'ihe banyere ịdoụbiga mmanya ókè, hụ na ị ga-achọ ndụmọdụ ahụike. Fọdụ n'ime ndị Jeremaya mere lelee gụnyere ịmụ anya arọ nrọ, mgbanwe ọnọdụ uche, afọ mgbu, oge ufodu obi otiti, na nchiyo.
Tupu ị nyekwuo ọgwụ lorcaserin HCl, ịkwesịrị ịtụle ihe ndị na-adịghị mma na ị andụ ọgwụ ọjọọ;
Usersfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịbụ nfụkasị ihe na-emetụta ụbụrụ
Womenmụ nwanyị dị ime na nne na-enye ara ara ekwesịghị ịhazi lorcaserin n'ihi na ọ nwere ike imetụta nwa ahụ
Ihe mgbakwunye nwere ike soro ụfọdụ ọgwụ ọgwụ na ọgwụ ndị na-edeghị ọgwụ na-emekọrịta ihe ma gbochie ha na ọgwụ ọgwụ
A na-egbochi ọgwụ ịorụ ọgwụ Lorcaserin maka ndị ọrịa nwere ike ịrịa kansa ma ọ bụ ndị nwere ọrịa ahụ.
Nye Nwere Ike Iji Lorcaserin?
Lorcaserin bara uru na ọgwụgwọ nke oke ibu. Dịka iwu FDA si kwuo, ọgwụ serotonergic a dabara adaba maka ndị buru oke ibu nwere BMI karịrị 27kg / m2 na ndị okenye buru ibu na BMI karịrị 30kg / m2. Otú ọ dị, ndenye ọgwụ ahụ dị irè maka ndị ọrịa nwere ọnọdụ metụtara ibu dịka dyslipidemia, ọbara mgbali elu, ọrịa obi, na ọbara mgbali elu.
Naanị ndị ọrịa toro eto nwere ike ime ka lorcaserin zụta maka njikwa ibu arọ. Ntughari site na ule ogwu ndi ogwu jiri gosiputa karia ndi mmadu kariri 18. Kedu ihe ọzọ, nchekwa ya na nrụpụta ọrụ ya na ndị ọrịa n'okpuru afọ 18 ekwenyebeghị.
Ọ bụ ezie na okenye ọ bụla buru ibu ma ọ bụ buru oke ibu nwere ike iji mgbakwunye ụfụ lorcaserin, enwere ụfọdụ mmegide na otu ole na ole. Dị ka ihe atụ, ụmụ nwanyị dị ime enweghị ajụjụ. E wezụga nke ahụ, o doghị anya ma ọgwụ ahụ ọ gafere mmiri ara ara, yabụ, ndị nne na-enye ụmụ ara ara anaghị anara ya.
Kedu ihe dị iche n'etiti Lorcaserin, Cetilistat, na Orlistat?
Lorcaserin HCl bụ agụụ na-egbochi agụụ mgbe a na-edebanye aha na cetilistat na-egbochi hydrolysis nke triglycerides n'ime acid fatty. Ihe mgbakwunye ahụ na-eleba anya na mpaghara ụbụrụ hypothalamic nke na-achịkwa agụụ na njupụta. Iwere ike ikwu okwu ga-ebido satietụ ma gosipụta ahụ gị na ị juputara n’agbanyeghi obere ego ị riri. Ya mere, ọnwụ ọnwụ na-ebute n'ihi nbelata nri nri na ịjụ nri.
Na lorcaserin, onye nwere oke ibu nwere ike ida karịa 5% nke ibu ahụ ha na mbido ya na ihe dịka 3cm. Ọgwụ ahụ gosipụtara mgbanwe dị ịrịba ama karịa mgbe ị na-eji ndepụta.
Na 2012, lorcaserin hydrochloride meriri nnabata FDA wee bụrụ ọgwụ eji ede ọgwụ maka oke ibu na oke metụtara nsogbu. Otú ọ dị, Federal Agency wepụrụ ya n'ahịa n'ihi mmụba nke ọganihu cancer n'etiti ndị ọrụ ya.
Dị nnọọ ka lorcaserin (Belviq), cetilistat bụ ọgwụ mgbochi oke ibu. Akingụ ọgwụ na-egbochi egbugbere ọnụ pancreatic, nke bụ ọrụ maka imebi triglycerides. N'ihi ya, triglycerides agaghị etinye hydrolyze n'ime fatty acids bara uru maka ịmịnye ahụ nke ọma n'ime ahụ. Ya mere, a ga-ewepụ abụba na-enweghị nri.
Cetilistat nwere ike ibute mbelata ihe ruru 10% nke ibu ahụ ma belata oke gburugburu.
N'adịghị ka mmetụta ndị dị na lorcaserin, ihe mgbaàmà na-adịghị mma nke cetilistat na-emetụta mgbaze. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ ga-enwe mmanu mmanu na akwa rụrụ arụ, ikuku, ọtụtụ afọ, ma ọ bụ eriri afọ.
Ceilistat enwetabeghị nkwado nke FDA n'ihi na ọ bụ ugbu a na usoro mmalite nke ọmụmụ mmadụ. Ruo ugbu a, mgbakwunye ahụ nwere nsonaazụ na-ekwe nkwa. Nkọwa dị n'etiti usoro ọgwụgwọ nke cetilistat na ndepụta aha gosipụtara na nke mbụ na-eme ka ọnwụ dị arọ na-eme ka ọ ghara ịba ụba na ọ nwere ike ịnabata ya.
Ihe gbakwunyere cetilistat bụ na ọ naghị eme ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ na enzymes ma ọ bụ usoro ụjọ ahụ. Eziokwu a na-akọwa ihe kpatara na anaghị enwe mmeghachi omume na-adịghị mma.
Ma Lorcaserin na akwukwo enyemaka na oke ọnwụ. Agbanyeghị, usoro ọrụ ha dị iche.
Dịka cetilistat, Orlistat na-egbochi nwa oge na gastric na pancreatic lipases. Ihe mgbochi a na-egbochi hydrolysis nke triglycerides site na nri mmadụ, ya mere, abụba niile etinye obi gị dum na-ewepụ agbanweghi agbanwe.
Dika ule ndi ogwugwo di, ndi mmadu nwere ike idalata ngwa ngwa mgbe ha na-eji ihe edeputara karia ndi no na placebo. Ná ngwụsị nke ọnwa isii, a ga-enwe mgbanwe ndị pụtara ìhè na gburugburu nke ukwu. E wezụga nke ahụ, ị ​​theụ ọgwụ na-ebelata ọbara mgbali na omume nke ọrịa shuga nke ụdị II.
Orlistat bụ ezigbo ụzọ ọzọ lorcaserin dị dị ka ọgwụ ọgwụ edere maka ịgwọ oke ibu mana ị nwekwara ike ịzụta ihe na-abaghị uru. N'adịghị ka lorcaserin, ọgwụ a ka dị na whitelist nke FDA. Ọtụtụ steeti ga-ere mgbakwunye ahụ na-enweghị mkpa ọgwụ eji arụ ọrụ. Were, dịka ọmụmaatụ, na US, European Union, na Australia, ịzụta orlistat dị mfe dị ka ịkwụ ụgwọ maka ndị sneakers. Orlistat enweghị mmetụta na GIT enzymes ndị ọzọ ma ọ bụ usoro ụjọ ahụ.
Na a nutshell
Cetilistat na ndepụta aha bụ ndị ọzọ na-ekwu okwu maka ịgwọ oke oke na oke ibu. Agbanyeghị, arụmọrụ ha ga-abawanye naanị site na mmega ahụ na nri obere kalori. Lorcaserin na listi na-ebelata ibu na oke olu mana ịkwụsị ha ga-eme ka onye ọrụ nwetaghachi ihe 35% nke ihe furu efu.
Ruo ugbu a, ọ bụ naanị mgbakwunye Cetilistat emebeghị ya na US FDA whitelist dịka ọ ka nọ na ọnwụnwa ahụike. Banyere ndị na-edebanye aha, ịchọta ya dị ka ịzụ paracetamol gị. N'aka nke ọzọ, ịme mkpọtụ lorcaserin bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ebe US Federal Agency mebiri nnabata ya na mbido 2020.
Ọgwụ atọ niile na-arụ ọrụ nke ọma mana cetilistat nwere nsonaazụ pụtara ama. E wezụga nke ahụ, ọ nwere obere mmetụta dị na ya ma anabatakwa ya nke ọma n'ime ahụ.
Ebee ka Zuru Lorcaserin na ndi ozo ya?
Nwere ike ime ka lorcaserin zụta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ntụ ntụ dị n'ọtụtụ maka ndị na-eme nchọpụta na ndị nyocha. Mgbe ebumnuche gị bụ ka ị ghara inwekwu pound n'ihi oke ibu, ị nwere ike ịlele lorcaserin maka ire ere n'ịntanetị. Agbanyeghị, ịnwere ike ịchọ ndenye ọgwụ n'ihi ntuziaka siri ike nke FDA.
Ọ bụrụ na ị na-achọ lorcaserin ma ọ bụ ndị etiti ya, ị ga-enyocha ya na CMOAPI maka ezigbo ngwaahịa dị mma. Ogige anyị enwetawo mmesi obi ike dị mma.
Kedu ka m ga - esi belviq maka nsonaazụ kacha mma?
Ghaa mbadamba mbupute a gbasaa ma egbutula, taa, ma ọ bụ mebie ya. Nwere ike were Belviq ma ọ bụ na-enweghị nri. Ikwesighi idobi ma ọ dịkarịa ala 5% nke ịmalite ịmalite n'oge izu 12 mbụ nke iburu Belviq na iri nri kalori dị ala.
Ego ole ka ị nwere ike ida na belviq?
Lorcaserin, nke ejiri ya na nri na mmega ahụ, na-ebute oke nhalata ihe dịka 12.9 lb (5.8 n'arọ) ma e jiri ya tụnyere 5.6 lb (2.5 n'arọ) na placebo.
Ogologo oge ole ka ị kwesịrị iji belviq?
Nwere ike were Belviq ma ọ bụ na-enweghị nri. Ikwesighi idobi ma ọ dịkarịa ala 5% nke ịmalite ịmalite n'oge izu 12 mbụ nke iburu Belviq na iri nri kalori dị ala. Kpọọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị gaghị atụfu ma ọ dịkarịa ala 5% nke ịmalite ịmalite mgbe ị gụsịrị ọgwụ maka izu 12.
Kedu ka belviq si eme gị?
A maara Belviq dị ka onye na-anabata ihe serotonin 2C agonist, nke pụtara na ọ na-arụ ọrụ akụkụ ụfọdụ nke ụbụrụ gị nke na-eme ka ị nwee afọ ojuju. Obere agụụ na-eduga n'inwe obere nri, nke na-eduga n'ibu ọnwụ.
Kedu mmetụta ndị dị na lorcaserin?
Mmetụta ndị dị na Belviq gụnyere: ọbara shuga dị ala (hypoglycemia), nsogbu uche, obere obi ọkụ, isi ọwụwa, dizziness, ụra, ike ọgwụgwụ, ike ọgwụgwụ,
Nwere ike ị drinkụ mmanya na-aba n'anya mgbe ị na-ewere belviq?
Ndị ọgwụ ọ bụla na-eri ọnwụ na-emekọrịta ihe ọ alcoholụ alcoholụ na-aba n'anya? Ọ bụghị ọgwụ ọjọọ niile na-eme ka mmadụ withụọ mmanya na-aba n’anya; dịka ọmụmaatụ, lorcaserin (Belviq, Belviq XR) na orlistat (Alli, Xenical) edepụtaghị mmekọrịta ọgwụ mmanya na akara ngwaahịa ha.
Can belviq nwere ike ibute uru ibu?
Nsonaazụ ebughibu. Ndị na-a theụ ọgwụ ahụ ruo otu afọ nwere ike ịtụ anya ida naanị 3 ruo 3.7 nke ibu ha, ma nwee ike iburu ibu ahụ, nyocha na-atụ aro. N'otu ule, ndị ọrịa na-ewere Belviq efunahụ ihe ruru pasent 5 nke ahụ ha mgbe ọnwa 12 gachara, mana ha nwetara 25 pasent nke ya na njedebe nke afọ nke abụọ.
Kedu nke kachasị mma ma ọ bụ belviq?
Belviq na Contrave dị na klaasị ọgwụ dị iche iche. Belviq bụ seontonin 2C agonist na-enweta ihe na Contrave bụ nchikota nke opioid antagonist na antidepressant.
Belviq ọ na-arụ ọrụ n'ezie?
Ndị na-a theụ ọgwụ ahụ maka otu afọ nwere ike ịtụ anya ida naanị 3 ruo 3.7 nke ibu ha
Ndi belviq yiri Phentermine?
Belviq (lorcaserin hydrochloride) na Adipex-P (phentermine) na-eji maka ibu njikwa na obese ọrịa na mgbakwunye na nri na mmega. A na-eji Belviq eme ihe maka ịdị arọ na-adịghị ala ala.
A kwụsịrị belviq?
Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ na United States (FDA) rịọrọ ka onye mepụtara Belviq, Belviq XR (lorcaserin) jiri aka ya wepụ ọgwụ na-ebu ibu na ahịa US.
Taylor, J., Dietrich, E., na Powell, J. (2013). Lorcaserin maka njikwa ibu. Ọrịa shuga, Ọrịa Metabolic, na Oké Ibu.
Hoy, SM (2013). Lorcaserin: A Nyochaa nke Oji ya na Ebube Na-adịghị Ala. Ọgwụ.
Hess, R., na Cross, LB (2013). Nchedo na arụmọrụ nke Lorcaserin na njikwa oke ibu. Ọgwụ Postgraduate.
Brashier, DB, Sharma, AK, Dahiya, N., na Singh, SK (2014). Lorcaserin: Ọgwụ Ọgwụ Antiobesity. Akwụkwọ nke Pharmacology & Pharmacotherapeutics.
Chan, EW et al. (2013). Fficrụ ọrụ na nchekwa nke Lorcaserin na Ndị Okenye Obese: Meta-Analysis nke 1-afọ Randomized Control Trials (RCTs) na Nkọwa Nyocha na Short-Term RCTs. Obere Nyocha.
Nigro, SC, Luon, D., na Baker, WL (2013). Lorcaserin: Akwụkwọ akụkọ Serotonin 2C Agonist maka Ọgwụgwọ Ibu. Nnyocha Ahụike Ugbu a na Mkpebi.